The Institute for the Study and Treatment of Pain - SOMALI Waa maxay IMS? GunnIMS: muruqyada dhexdooda Carbinta
SOMALI Waa maxay IMS? GunnIMS: muruqyada dhexdooda Carbinta
Waa maxay IMS? GunnIMS: muruqyada dhexdooda Carbinta
SOMALI LANGUAGE / turjumay
Boggan ayaa deg deg ah loo tarjumay isticmaalaya Google Translate, computer ah ahbaa dadaal ugu turjumo macluumaadka daryeelka caafimaadka oo muhiim u ah dadweynaha. Isticmaal dhibic u soo dhaadhacay sanduuqa midig sare ee webpage kasta inuu turjumo macluumaadka si luqada aad door bidayso. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan nala soo xidhiidh si aad u codsato gargaar. Fadlan ha iga cafiyo wixii qalad typographical, turjumaanada dhabta ah iskaa wax u qabso aadanaha waxaa wax ku oolka ah ; )
Waa maxay Gunn IMS? Gunn muruqyada dhexdooda Carbinta
Supersensitivity iyo yaraynta muruqa aan la qalo karaa oo 'iska jaray,' halka 'xanuunka joojiya iyo kiniini kale xanuunka hoosaasin kaliya xanuunka (badanaa liidata) iyo kor u sumoobo, sii daray dhibaatada. Neuropathy kaliya ay jawaab u tahay talooyin jidhka ee tamarta.
Muruqyada dhexdooda kicinta (IMS) waa nidaam guud ee ogaanshaha iyo daaweynta syndromes xanuun myofascial (xaaladaha xanuun joogto ah kuwaas oo ka dhaca nidaamka muruqyada marka waa jirin calaamad cad ee dhaawac ama barar). IMS waxa aasaas u ah Science Medical Western, oo uu leeyahay aasaas adag ee ay model radiculopathic xanuun, kaas oo hadda taageeray khubaro badan oo duurka ku. Waxaa la horumariyo by Dr. Gunn isagoo dhakhtar ee magdhawga shaqaalaha Board of British Columbia ee ee 70, halkaas oo uu baaritaan tiro badan oo ah xaaladaha mysteriously madax ka dib markii careysan yahay qaabka xumaada uu haatan heysto. daaweynta, taas oo isticmaalaan irbado duridda maxaa yeelay, iyagu waa qalab thinnest heli karaa in loogu talagalay in ay dhex gasho qoto dheer gudahood unugyada muruqa, si gaar ah diirada u saaran muruqyada ku dhaawacmeen in qandaraas oo noqday gaabisay Murugadii.
IMS tiirsan on baaritaan dhamaystiran jidhka ee bukaanka by dhakhtar karti, loo tababaray in ay aqoonsadaan calaamadaha jirka xanuun neuropathic. baaritaanka Tani waxay jirka waa lagama maarmaan tan iyo xanuun joogto ah waa inta badan maskaxda ah sida ka soo horjeeda dhismaha, sidaas darteed, aan la arki karin in ay qaali X-rays, Tests MRI, Bone iyo CT Sawirro. Ka gaabinta in la aqoonsado calaamadaha, kuwaas oo keeni doonta in cudur aan sax ahayn, iyo sidaas, hal dhibic ka bilaabo masaakiintaada, daaweynta jidh ahaaneed.
Daaweyntu waxay ku lug leedahay needling qalalan ee goobaha ay abaartu saamaysay ee jirka oo aan la isku duro wax kasta. goobaha irbad wuxuu noqon karaa at xuddunta u ah giijisan, wax qandaraas ah guutooyin muruqa, ama waxay noqon kartaa meel u dhow dhabarta meesha xididka dareemaha laga yaabaa in ay noqdaan dad cun iyo supersensitive. Gelinta muruqa caadiga ah waa xanuun, Si kastaba ha ahaatee, a soo gaabiyey, muruqa supersensitive doono 'guranayaan' irbadda waxa lagu tilmaami karaa dareen maroojis ah. Natiijadu waxay soohay waa. Mid ka mid ah, receptor stretch in muruqa ah lagu kiciyaa, soo saara nasashada reflex (dheer). Laba, irbadda sidoo kale sababa dhaawac yar oo barbaro dhiig aagga, Abaabulka geeddi-bogsashada dabiiciga ah. Saddex, daaweynta abuuraa iman kara korontada ee muruqa si caadi ah mar kale ka dhigi function dareemaha. Irbadda oo loo isticmaalo in IMS, by madadaalo spindles muruqa, muhiimad noqdo qalab gaar ah oo u gaar ah, waayo cudurka of Neuropathic Xanuun murqaha.
Natiijada daaweynta waa in la sii daayo yaraynta muruqa, taas oo u riixay on iyo dhibtaa dareemaha. meelaha Supersensitive la biinta karo, iyo jiido ee joogtada ah ee muruqyada gaabisay in lagu sii daayo. IMS waa mid aad waxtar u leh sii daayo muruqyada gaabisay hoos contracture, oon ku keenaya xanuun farsamo ka jiido muruqa. IMS, dhaqan, oo daawaynaya xaaladda dahsoon neuropathic keena xanuunka. Marka hawlkarnimo sameeyaa, IMS leeyahay heerka guul cajiib ah, sida la xaqiijiyey by kamuhimsan calaamadaha iyo calaamooyin, iyo tan iyo dhabar xanuunka joogtada ah oo leh calaamado xididka.
IMS uu u dhigmo siyaabo qaar ka mid ah si ay u acupuncture; Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah kala duwanaanshaha u muhiim ah. IMS u baahan yahay baaritaan caafimaad oo cudurka by dhakhtar aqoon anatomy, cirbadaha insertions waxaa ka muuqata calaamado jireed oo aan sida uu sheegay sanyihiin, loolalka non-cilmiyeed, halka saamaynta shakhsi ahaan iyo Ujeedada waxaa sida caadiga ah si deg deg ah soo maray.
Keywords: Carbinta, muruqyada dhexdooda, IMS, cgims, IMS Gunn, needling qalalan, acupuncture, dhibic farganka, xanuun muruqyada dhexdooda myofascial
Machadka Daraasaadka iyo Daaweynta Xanuunka (iSTOP)
HELI CGIMS dhakhtar - HAGAHA CAALAMIGA AH
AFAFKA DHEERAAD AH